४५० नेपाली विदेशका जेलमा, २५ लाई मृत्युदण्ड « Janata Samachar
काठमाडौं । धन कमाउने र परिवारमा खुसी ल्याउने लालसा बोकेर परदेशिएका ४५० नेपाली विदेशका जेलमा जीवन काटिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङक अनुसार २५ जना नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको छ । वैदेशिक राजगारीको शिलशिलामा गएकाहरुले जान अञ्जानबस गरेको गल्ती र कतिपयले फसाउन खाजेकै कारण उनीहरु जेलदेखि मृत्युदण्डको सजायसम्म भोग्न बाध्य भएका छन् ।
बोर्डको तथ्याङ अनुसार सबैभन्दा बढी यूएइमा १८१ जना नेपाली त्यहाँको जेलमा छन् भने सबैभन्दा कम बहराइनमा ५ जना नेपाली रहेका छन् ।
कुन देशमा कति नेपाली जेलमा ?
यूएईमा – १८१ जना
मलेसिया– ११९ जना
कुवेत– ५७ जना
साउदी अरव जेद्दा –३१ जना
कतार – ३१ जना
साउदी अरव रियाद– २३ जना
वराइराइन – ५ जना
ओमन – ३ जना
विदेशका जेलमा रहेका नेपालीहरुमा ३ महिना सजाय तोकिएकादेखि आजीवन कारावास तोकिएकाहरु सम्म छन् । कुवेतमा ९ जना, यूएईमा ४ जना, कतारमा ३ जना बहराइनमा १ जना गरी ७ जना नेपाली आजिवन कारावासको सजाय काटीरहेका छन् । त्यस्तै २५ बर्ष जेल सजाय पाएका २ जना, १५ बर्ष जेल सजाय पाएका २ जना, १५ बर्ष कम जेल सजाय पाएका ५ जना, १० बर्ष कम जेल सजाय पाएका १९ जना, १ बर्षभन्दा कम सजाय पाएका ४४ जना र ३ महिना कम सजाय पाएका ७५ जना नेपालीहरु विदेशी जेलमा सजाय काटिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये केहि आफैले गल्ती गरेका कारण जेलमा परेका छन् भने केहि फसाइएकाहरु पनि रहेको बैदेशिक रोजागर बोर्डका प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीले बताउनुभयो ।
जेलमा रहेकामध्ये कति जनालाई त त किन र के मुद्दामा जेल पु¥याइयो भन्नेसम्म थाहा छैन । जसमध्ये जेलमा रहेका २९३ जना नेपालीको जेल सजाय तोकिएको छैन । अरुले फसाएर जेलमा परेकाहरुका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले सजाय घटाउन र जेलबाट निकाल्न प्रयास गरिराखेको बोर्डका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा विभिन्न ६ मुलुकमा गरी २५ जना नेपाली मृत्युदण्ड कुरेर जेलमा बसिरहेका छन् । मृत्युदण्ड तोकिएकैहरु पनि कतिपय नेपालीलाई फसाएको हुनसक्ने बोर्डको आशंका छ ।
मृत्युदण्ड सजाय पाएकाहरु कन देशमा कति जना ?
मलेसिया – १६ जना
साउदी अरव रियाद जेलमा –५ जना
कुवेत – ३ जना
यूएई – १ जना
अरुको देशमा पसिना बेच्न गएका नेपाली कसरी मृत्युदण्ड भोग्ने गरी अपराध गर्न पुग्छन् ? बोर्डको जवाफ छ केहिले रिस र आवेगमा अपराध गरेर मृत्युदण्डको सजाय पाउने गरी अपराध गरेको भेटिएको छ भने केहिलाई फसाएको पाइएको छ । यद्यपी यसका विषयमा गतिलो अनुसन्धान हुन सकेको छैन् । तर, जेलमा भने त्यहाको कानुन र संस्कार नबुझेका कारण पुग्नेहरुको संख्या धेरै छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु मध्ये केहि नेपाली अंगभंग हुनुका साथै कोमामा समेत पुगेका छन् । सवारी दुर्घटना, कामको शिलशिलामा लागेको चोटपटक, लडेर । यस्ता विभिन्न कारणले १८ नेपाली कोमामा पुगेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ ।
कुन देशमा कति जना छन् कोमामा ?
कतार – ९ जना
साउदी अरव रियाद– ४ जना
कुवेत – १ जना
ओमन – १ जना
जापान – १ जना
साउदी अरव जेद्दा – १ जना
कोमामा रहेका मध्ये १५ पुरुष र ३ जना महिला छन् । जसमा २ जना पूर्णरुपमा अर्धचेत अवस्थामा छन् । ४ जना सुधारन्मुख अवस्थामा रहेको बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कोमामा रहेका यस्ता विरामीहरुलाई बोर्डले प्रतिव्यक्ति ७ लाखसम्म उपचार खर्च दिदै आएको छ । आवश्यक परे मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर सरकारले थप सहयोग पनि गर्दै आएको बोर्डका प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा विदेश गएका मध्ये विभिन्न कारणले जेल जाने, अंगभंग हुने र ज्यान नै गुमाउने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । व्यक्ति जाने देशको नियम कानुन नबुझाइनुका साथै कार्यस्थलमा हुने अवसावधानीका विषयमा सचेत नगराउदा यस्ता समस्या बढ्दै गएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
नेकपा विभाजन नभएसम्म कांग्रेसले कसैसँग सत्ता सहकार्य नगर्ने
हात्तीको आक्रमणबाट वृद्धाकाे मृत्यु
अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा विकासका काम प्रभावित
बालविवाह रोक्न पण्डितलाई कानून सिकाउँदै पर्वत प्रहरी
फुड सप्लिमेन्टकाे खरिद बिक्रीमा समस्या